प्लाष्टिकको बोत्तलबाट पानी पिउनुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
मुख्य पृष्ठस्वास्थ्यप्लाष्टिकको बोत्तलबाट पानी पिउनुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
प्रायः हामीपानी पिउँदा प्लाष्टिकको बोत्तलको प्रयोग गर्छौैँ । तर, तपाईंलाई थाहा छ ? प्लाष्टिकको बोत्तलबाट पानी पिउनु हानिकारक छ ।
केही मानिसले थाहा पाएरै पनि या केहीले थाहा नपाएरै पनि प्लाष्टिकको बोत्तलको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जुन प्लास्टिक बोत्तललाई मानिस बारम्बार पानी पिउन प्रयोग गर्छन्, त्यसमा ट्वाइलेटको सीटभन्दा बढी किटाणु हुने एक नयाँ अनुसन्धानले बताएको छ ।
ट्रेडमिल रिभ्युद्वारा गराइएको एक नयाँ अध्ययनबाट ती किटाणुले रोगलाई निम्तो दिने गर्छन् । ती किटाणु निकै खतरनाक हुने उक्त अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । अध्ययनको नतिजालाई विश्वास गर्ने हो भने, बोतलमा पाइने किटाणुमध्ये ६० प्रतिशत यस्ता किटाणु छन्, जो गम्भीर रोगका कारण बन्न सक्छन् ।
त्यसोभए के गर्ने त ?
– यसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका तपाईं कुनै पनि प्रयोग भइसकेका प्लास्टिकका बोतललाई पुनः प्रयोग नगरौं ।
–एकपटक प्रयोग गरेपछि त्यसलाई फ्याँक्नुहोस् । विशेष गरी बजारमा पाइने पानीको बोतललाई दोस्रोपटक प्रयोग गर्नु निकै खतरनाक हुने बताइन्छ ।
–सकेसम्म प्लास्टिकको बोतल दोस्रोपटक प्रयोग गर्नु मानवीय स्वास्थ्यका लागि निकै घातक मानिन्छ ।
– सिसा र स्टेनलेस स्टिलले बनेको बोतल प्रयोग गर्दा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
– तपाईं घरको प्रयोजनका लागि बिपिए फ्रि प्लास्टिक बोतल खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ ।